पुरुष र महिलाहरुको लागि पोकमोन टैटू डिजाइन आइडिया
पुरुष र महिलाहरुको लागि पोकमोन ट्याटुस डिजाइन आइडिया
sonitattoo अगस्ट 19, 2016
त्यहाँ कुनै पनि तरिका हो जुन हामी टोकमोट टैटूको बारेमा कुरा नगरी ट्याटु ग्यामरहरू छलफल गर्न सक्दछौं। जब यो खेल पोकिमोन आउँदछ अचानक लोकप्रिय छ।
सर्वश्रेष्ठ साथीहरूको लागि पोकिनोन टैटू
मित्रता ठोस गर्न पोकिमोन टटू एक महत्वको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक मित्र छ जो आफ्नो दिल को लागि धेरै प्रिय हो, एक तरीका तपाईं रिश्ते बनाउन सक्छ रोमांचक #Pokemon टैटू को लागि जाना छ।
मुट्ठीमा पोकोकन टटू
सकियो दिनहरू जब मात्र बच्चाहरू थिए जसले केवल पोकिनोन प्राणीहरू हेर्न र सराहना गर्छन। जीवहरू 20 वर्ष भन्दा बढीको लागि अस्तित्वमा छन् र तिनीहरू केवल वयस्कों भन्दा पनि लोकप्रिय हुन्छन्। के तपाईं यो मुट्ठीमा पोकमोनको #tattoo रुचि गर्नुहुन्छ? धेरैजना व्यक्ति जो देखाउन चाहानुहुन्छ कि उनीहरूले कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् बलियो।
पेट मा Pokemon टैटू
पुरुष र महिलाहरूले पेटका छेउमा पोमोन ट्याटुको प्रयोग गर्न सक्छन्। तपाईं आफ्नो शरीर कुनै पनि पोमोन प्राणी संग सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ प्रतिभाशाली कलाकारको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो शरीरमा तपाईंको प्रकारको पोकमको स्याङ्जा लगाउनको लागि, तपाईं आफ्नो शरीरमा सबैभन्दा उत्तम टैटू पाउन सक्नुहुन्छ।
पछाडि पोकोनट टैटू सबैभन्दा टाटाटोस मध्ये एक हुन सक्छ जुन तपाई आफैले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको टैटटोहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो ब्याकमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
खुट्टामा पोकोन टटू
खुट्टामा पोकोमोन टैटूहरू सम्झन सकिँदैन। ती प्यारा प्राणीहरू प्यारा हुन्, किनकि धेरै मानिसहरू आफ्नो खुट्टामा टैटूको प्रयोग गर्दैछन्। तपाईँ यी टैटटोहरू कसरी मन पराउनुहुन्छ?
हतियारमा पोकोकन टटू
हतियारहरू शरीरको एक भाग हुन् जहाँ कुनै पनि अफसोस बिना पोकोमन टटू प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब तपाईं पोकिमोन टटूको साथ फरक बनाउन चाहनुहुन्छ भने, स्थानहरू जुन तपाईं स्याही गर्न सक्नुहुनेछ त्यो हातमा छ। तपाईं निश्चित रूपमा आफ्नो हातमा लागू गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
सुन्दर पोयोकन टटू
जब तपाईं आफ्नो शरीरमा प्यारा टैटू स्यालो लगाउन चाहानुहुन्छ, पोकिमोनको सोच्नुहोस्। त्यस्ता तरिकाहरू छन् जुन तपाईं यो पोकिमोन प्राप्त गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको शरीरमा विभिन्न # डिसेन्टाइनमा हुन सक्छ।
शुभ पोखरोन टटू
सबैजना आनन्दित हुन चाहन्छन्। पोकिमोन टटू संग, तपाईं त्यो आनन्द बनाउन को लागी कुनै पनि पोखमोन टटू को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सबैलाई आवश्यक छ र तपाईंको शरीरमा पोकमोन टटू आनन्दित तुल्याउन चाहन्छु।
महिलाहरु को लागि पोकोनट टैटू
यो केवल न केवल मान्छे हो जसले आफैलाई ध्यान दिन को लागी पोकिनोन टटू को प्रयोग गर्दछ। अहिले पनि महिलाहरु यस प्रकारका टटू प्रयोग गर्दै छन् जुन भीडमा उभिएका छन।
के तपाईं डरलाग्दो मायालु व्यक्ति हुनुहुन्छ? के तपाईं चुनौतीहरु को समयमा मजा गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँ त्यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईं यो टटू को उपयोग गर्न को लागी शांत लगाउन सक्नुहुनेछ।
Pokemon Tattoos को ठूलो संग्रह
हुनसक्छ, तपाई पोकमोन प्राणीहरूको पछाडि पछाडी प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहुन्न। तपाईं आफ्नो पछाडीमा उनीहरूको ठूलो संग्रह राख्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूले तिनीहरूलाई देखाउँदा उनीहरूले सुन्दर देख्नेछन्।
हातमा बहु पोकमोन ट्याटुहरू
तपाईं आफ्नो हातमा तीन पोकिनोन प्राणीहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हातमा पोकिमोन ट्याटोको प्रयोगले तपाईं सार्वजनिक हुँदा प्रदर्शन गर्न धेरै सजिलैसँग सजिलै संगै छन्।
प्रेम पोकोमन टैटू
यदि तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भने, पोकिनोन टैटू तपाईं के गर्न सक्नुहुनेछ। केवल आफ्नो अनुकूलित पोकमोन ट्याटू सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईको Pokemon मा शब्द शिलालेखहरू हुनेछ।
Ladies को लागि प्यारा Pokemon टैटू
महिलाहरूको लागि मनोवृत्ति र प्रतिष्ठाबारे कुरा गर्दै, तपाईं असाधारण सुन्दर र हट हेर्न यस डिजाइनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको जांघमा त्यो पोकिनोन टैटू असाधारण बनाउनुहोस्। देवियों प्यारा टैटू प्यार गर्छन र तपाईं यस प्रकार को टैटू लाई कम नहीं गरेर सकते।
मिल्ने प्रेमीहरू पोकमोन ट्याटुस
आफ्नो जांघहरूमा यो मिल्ने पोकमोन ट्याटोस पाउनुहोस् अर्को तहमा तपाईंको सम्बन्ध लिन जब तपाईं यो प्रकारको ट्याटको मसीको साथमा लगाउनुहुन्छ।
सर्वश्रेष्ठ मित्रहरु Pokemon टैटू
जब तपाईं मान्छे यो टैटूहरूको लागि जानुहुन्छ जब तपाईंका मित्रहरूसँग मित्रता बन्धन सिर्जना गर्नुहोस्। प्रत्येक पल्ट जब तपाईले मान्छे भेट्नुहुन्छ, यी पोकिमोन टैटूहरू तपाईका लागि धेरै कुरा गरिरहेका छन्।
परिवार पोकमोन टैटू
हामी परिवारलाई माया गर्दछौं र एक तरिका हामी बताउन सक्छौं कि हाम्रो पारिवारिक कथाहरू यदि हामी तपाईंको शरीरमा पोमोनोन टैटटोहरूको प्रयोग गर्न सक्दछौं।
सुन्दर पोकमोन टटू
महिलाहरू मित्रता र प्रेम अनुस्मारकहरूसँग रमाइलो हुन्छन् विशेषकर जब यो टैटूहरू लगाउँछन्। यी Pokemon टैटूहरूमा एक नजर लिनुहोस् र प्रेमको लागि आफ्नो टटू को चयन गर्नुहोस्।
युगल पोकमोन टटू
तपाईंको कंधेहरूमा एक अर्काको लागि आफ्नो प्रेम प्रमाणित गर्न Pokemon ट्याटोहरू जोड्नुहोस्।
के तपाईं जीवनको प्रेमी हुनुहुन्छ? के तपाईं ट्याट गर्न चाहानुहुन्छ कि प्रमाणित हुनेछ कि तपाइँ बचाउन वा जीवनलाई प्रेम गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसपछि यो टैटूको लागि जानुहोस्।
तपाईं आफैलाई राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो खुट्टामा यो बक्सिंग पोकोमन ट्याटूको लागि जानुहुन्छ।
कलाई पोकमोन टटू
पोकिनोन साना जीवहरू छन् जुन फ्यान कलामा परिणत गरिएका छन्। Pikachu एक प्राणी इन्टरनेट तोडिएको छ। तपाईं सचेत हुनुहुन्छ कि मोबाइल एप, पोकिनोन गो एप्स भएको छ जुन लगभग सबैजना प्राप्त गर्न चाहन्छ।
ठूलो पोकमोन टटू
त्यहाँ पोकमोनसँग के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुनै अन्त्य छैन किनकि पुरुष र महिलाहरू अहिले पोकोमोनको ट्याटुमाको रूपमा प्रयोग गर्दैछन्।
महिलाहरु को लागि सुन्दर पोकमोन टैटू
के तपाइँ यो टैटू माया गर्नुहुन्छ? तपाईं यो टैटू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो शरीर उपस्थिति बदल्न सक्नुहुन्छ।
कुनै पनि पोकमोन टैटू भएको बेला बाहिर जाने सम्झना छैन। यद्यपि कार प्रेमीहरूले यो माया गर्न सक्दैनन्।
सजाइएका पोकमोन टाटाटोस
आज, पोकिमोन एक प्रवृति हो जुन यो पनि जो प्रशंसकहरू होइनन् अब उनीहरूको शरीरका विभिन्न भागहरूमा बिस्तारै छन्।
अनफोरनेट योग्य पोकनोन टैटू
जब तपाईं यिनी टैटू स्याही गर्नुहुन्छ, तपाईं ट्याटुको अन्य प्रेमीहरू भेट्टाउँदा सजिलै संग खडा हुन सक्नुहुन्छ।
मित्रहरूका लागि पोकिनोन टैटू
तपाईंको साथीहरू सँगसँगै ल्याउँदा तपाईंको यो पोकिमोन ट्याटोटोज जस्तै
पुरुषहरूको लागि अद्भुत पोकमोन टैटू
कुनै पनि यो एक प्रतिभाशाली कलाकार भन्दा राम्रो प्राप्त गर्न सक्दैन जसले तपाईंको लागि यो टैटू आकर्षित गर्नेछ।
केटीहरुको लागि गरम पोकमोन टैटू
सबै महिलाहरु सेक्सी हेर्न चाहन्छन। Pokemon ट्याटोहरू ट्याटोहरू मध्ये एक हुन् जसले तपाईंलाई एक लुकाउने उपस्थिति दिनेछ जब उनी दाँया भागमा पाईन्छ।
पेट र पोकमोन ट्याटूसँग चेक आउट गर्नुहोस् जुन प्यारा र अद्भुत छ।
आफ्नो नजर टाउकोको प्यारा रेखाचित्रको साथ यो परिवर्तन गर्नुहोस् र तपाईं एक महिलाको रूपमा माया गर्नुहुनेछ।
नृत्य पोर्कोन टटू
खुट्टाहरू एक भागमा हुन सक्छ जहाँ तपाईं यो नृत्य र सबै खुसी पोकमोन टटू हुन सक्नुहुनेछ।
Ladies for Pokemon Tattoos
तपाईं यो प्रकार को टटू को प्रयोग गर्दा थोडा अधिक स्त्रीिन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
पुरुषहरूको लागि पोकिनोन टैटू
मान्छे सधैं यो टैटू प्यार गर्नेछ किनभने यो स्वच्छ र रंगीन छ। ती हातहरू तिनीहरूको लागि एकदम सही ठाउँ हो।
के तपाईं पोकमोन टैटूहरू हिसाब गर्नुहुन्छ? तपाईं यिनी टैटूहरु मा एक नज़र लिन सक्नुहुनेछ र आफ्नै आफु बनाउनुहोस्।
डराएर पोकोकन टटू
तपाईं त्यो डरावनी पोकोमन ट्याट्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईले यो टटू स्याउको कुरा नगरी तपाईको अन्धकार कथाहरू बताउनेछ।
सबै हातहरु पोकिमोन टैटू
केहि विदेशीलाई जब तपाईं यस प्रकारका हातको लागि पोकिमोन ट्याटू र साथीहरूको साथमा जानुहुन्छ भने केहि प्राप्त गर्नुहोस्।
हाम्रो पोकिनोन ट्याटको अन्तिम मजाको हो। तपाईले पाउनुहुँदा आफ्नो टैटू संग मजा लिनुहोस्।
नोट: सबै तस्बिरहरू स्रोत मार्फत https://www.tumblr.com
क्राउन टैटूहरूआस्तीन टैटूहरूकमल फूल टटूFeather Tattooफूल टैटूहरूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूदूत टैटूतितली टैटूहरूआँखा टटूपक्षी टैटूहरूटैटू विचारहरूपैट टैटूफिर्ता ट्याटोहरूआदिवासी टैटूहरूट्याटुहरू केटीहरूको लागिकम्पास टैटूहात टाटाटोसओटोपस ट्याटूसंगीत टैटूहरूक्रस टैटूतीर टटूबिस्कुट टटूहेनना टैटूहीरे टैटूअनन्तता टटूज्यामितीय ट्याटुहरूkoi fish tattooसूर्य टैटूहरूप्यारा टैटूहरूईगल ट्याटोहृदय टटटोबिल्ली ट्याटोगुलाब टैटूहरूछाती टैटूहरूटखने टैटूचेरी खिलौना टैटूचन्द्र टोटोटोwatercolor टटूप्यार टैटूपुरुषहरूको लागि टैटूयुगल टैटूहरूगर्दन टैटूहरूहात ट्याटोसरिप टैटूएंकर टैटूहरूmehndi डिजाइनबहिनी टैटूहरूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूहात्ती टटूसिंह टटटोहरू